Sida Loo Aqoonsado Ilmaha Sunta | Bezzia
Sida Loo Aqoonsado Ilmo Sumeysan
Maria Jose Roldan | 10/09/2021 22:20 | Carruurta wax baro
Sunta ma aha dhibaato si gaar ah ugu dhacda dadka waaweyn, maadaama ay dhici karto inay jiraan carruur sun ah. Ilmaha leh dhibaatooyin xagga dabeecadda ah wuxuu dhaawac weyn u geysan karaa xudunta qoyska.
Haddii waalidku u fiirsadaan in ilmahoodu leeyihiin dabeecado sun ah, waxaa lagama maarmaan ah in sida ugu dhaqsaha badan loo arko xirfadle, si loo saxo dhibaatada dabeecadeed ee noocaas ah. Maqaalka soo socda waxaan kuugu sheegi doonnaa astaamaha lagu garto carruurta sunta ah ama kuwa daalimka ah iyo waxa laga yeelayo.
1 Sida Loo Aqoonsado Ilmaha Sunta ama Daalimka ah
2 Maxaa jira carruur sun ah
Sida Loo Aqoonsado Ilmaha Sunta ama Daalimka ah
Ma aha wax adag in la garto ilmo sun ah maadaama uu inta badan ka daran yahay kan caadiga ah iyo waxay si dhib leh u ixtiraamaan maamulka. Waa wax iska caadi ah in marka la eego dhacdadan, xiriirka waalidnimo iyo midka waalidnimo uu sii xumaanayo sanado badan. Markaa waxaan ku tusaynaa si faahfaahsan, astaamaha ugu badan ee carruurta sunta leh:
Sifada ama dabeecadda ugu weyni waa in la diido maamulka oo laga boodo xeerarka lagu soo rogay qoyska dhexdiisa. Waxay sameeyaan waxay rabaan iyadoon loo eegin waxay dadka kale dhahaan.
Caadi ahaan maya jawaab uma qaataan maaddaama ay aaminsan yihiin inay wax walba u qalmaan. Markay wax qaldamaan, waxay u falceliyaan xoog iyo cadho weyn.
Kuwani waa carruur dareenkoodu yar yahay oo aan waxba dareemin marka ay dadka kale u keenaan xanuun. Deegaanka qoyska, inta badan waxay ula dhaqmaan waalidiintooda bahdil iyo si yasid leh.
Dabeecadaha carruurta sunta ah ayaa inta badan ah kuwo dagaal badan waxaana lagu eedeeyaa xanaaq. Waxay si joogto ah u weerari karaan carruurta kale iyo waalidkood.
Mid kale oo ka mid ah astaamaha ugu badan ee carruurta sunta leh ayaa ah badiyaa wax isdabamarin. Markay timaaddo helitaanka wax iyaga anfacaya, waxay awood u leeyihiin inay cid kasta wax ka qabtaan.
Maxaa jira carruur sun ah
Waalidiin badan ayaa la yaaban haddii sunta Waa wax ilmuhu ku abtirsado ama waxay ka dhalatay waxbarasho xumo. Waxaa laga yaabaa in habdhaqankan aan habboonayn ay sabab u tahay dhibaatada maskaxda ee hidde -sidaha ee ilmaha. Dhinaca kale, ayaa sheegay in suntu ay sidoo kale ka imaan karto nooc ka mid ah taranta oo aan ku filnayn. Waxbarashada waalidku bixiso waxay saamayn ku yeelataa shakhsiyadda ilmaha.
Haddii ilmo lagu soo barbaariyo jawi sun ah, waa iska caadi in marka waqtiga la dhaafo, kan yar uu yeesho sifooyin daalimiin ah. Waxbarashadu waa inay ku salaysnaataa qiyam taxane ah oo ilmaha ka caawiya inuu koro ixtiraamaya xeerar iyo waajibaadyo taxane ah oo guriga gudihiisa ah.
Gaaban, shaqada waalidku waa furaha marka laga hadlayo ka hortagga ilmahooda inuu yeesho dabeecad sun ah. Garaadka shucuureed waa in la tixgeliyaa marka wax la barayo oo lagu beerayo qiyam taxane ah sida ixtiraam ama u damqasho dadka kale. Waxbarashadu waa lama huraan inta lagu jiro carruurnimada tan iyo marxaladdan, carruurtu waxay samaynayaan oo samaynayaan shakhsiyadooda. Marka laga hadlayo u kuurgalka dabeecadaha sunta ah qaarkood ee ilmaha, waxaa muhiim ah in waalidku raadsado caawinta xirfadle wanaagsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Hooyooyinka » Carruurta wax baro » Sida Loo Aqoonsado Ilmo Sumeysan
Badeecadaha nadiifinta Isbaanishka ee joogtada ah iyo vegan
Alaabta guriga Ikea waxay ku jabsadaan rack ama cannage